अ,न्त्यष्टिका लागि चि,तामा सुताइएका मलिक आगो लगाउने बेलामा जुरुक्क उठेर बसेपछि… – Ujyaalo Patrika
अ,न्त्यष्टिका लागि चि,तामा सुताइएका मलिक आगो लगाउने बेलामा जुरुक्क उठेर बसेपछि…
असावधानीका कारण झण्डै एक ब्यक्तिको अनाहकमा मृ, त्यु हुनवाट जोखिएको छ । अ, न्त्यष्टिका लागि भन्दै चि, तामा सुताइएको ब्यक्ति आगो लगाउने बेलामा जुरुक्कै उठेर चि, तामै बसे पछि म,लामी गएकाहरुको भागाभाग भएको छ । यो घ,टना भारत ओडिसाको हो । भारतको ओडिसाको गंजाम जिल्लामा भएको यो घ,टनाले अहिले भारतीय मिडियामा चर्चा पाएको छ ।
म,लामी गएकाहरुको भागाभाग भएको थियो । चि,तामा श, ब चलमलाउन थालेपछि म, लामी ड,राएका थिए । त्यसैबीच उनी उठेर चि,तामै बसे । त्यस्तो देखेर म,लामी भु’त भन्दै थप डराए । तर, तत्काल त्यहाँ भएका कसैले एक चिकित्सकलाई खबर गरे ।
उनीहरुले मृ,त्यु भएको ठानेका ब्यक्ति जिवितै थिए । सीमान्चक मलिक नाम गरेका ति ब्यक्तिलाई अहिले अस्पताल लगिएको छ । अहिले ती व्यक्तिको स्वास्थ्य स्थीर भएको त्यहाँका चिकित्सकले भारतीय मिडियालाई बताएका छन् ।
शनिबार जंगलमा बाख्रा चराउन गएका मलिक आइतबारसम्म घर नआएपछि खोज्न गएका व्यक्तिहरुले उनी मृ ’त भएको भन्दै घाटमा पुर्याएका थिए । उनलाई ज्वरो आएका कारण उनी बे’हो’स भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
Previous बिहानी पख श्रीमतीलाई खुसि बनाउँन खोज्दा : घट्यो यस्तो अचम्मको घटना . . .
Next तपाईलाई थाहा छ? पृथ्वीका सबै मानिसलाई माकुराले एक वर्षमै खाइदिन सक्छ !